Programme PROSPERERANALAMANGA: NAHOMBY NY FANDRAISANA ANJARA TAMIN'NY HETSIKA "SALON BIOLOJIKA 2019" - Programme PROSPERER ANALAMANGA: NAHOMBY NY FANDRAISANA ANJARA TAMIN'NY HETSIKA "SALON BIOLOJIKA 2019" - Programme PROSPERER
Notanterahina ny volana novambra taona 2019 lasa teo tao amin’ny Village VOARA Andohatapenaka ny « SALON BIOLOJIKA »izay nokarakarain’ny SYMABIO (Syndicat Malgache de l’Agriculture Biologique) sy ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono. Nandritra ny 3 andro izy ity ary isan’ny nandray anjara tamin’izany ny Fandaharanasa FANOITRA Analamanga
Ity hetsika ity dia mikendry ny fampiroboroboana ny tsenan’ny vokatra ara-biolojika eto Madagasikara amin’ny alàlan’ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena, ny varotra ary ny fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin’ireo orinasa mandray anjara samihafa. Noho izany dia nanampy ireo koperativa efa notohanany ny> Fandaharanasa FANOITRA mba ahafahan’ireo mpandraharaha mpamokatra mifanakalo traikefa eo amin’ny samy mpandraharaha ary indrindra ny fahitana lalam-barotra mandritra ny hetsika.
Koperative 03 no nisolotena ireo mpivondrona ao anatin’ny fivondronan’ny mpamokatra izay nahitana mpandraharaha mpamokatra 02 avy amin’ny koperativa KOFAMAMI sy mpandraharaha mpamokatra 02 avy amin’ny koperativa VTMMA , izy ireo moa dia misehatra ny sehatrasa famokorana masomboly voankazo, legioma ary voamaina, tao ihany koa ny fampirantiana mahakasika ny sehatrasa valiha na volobe.
Mitentina 1 896 000 Ariary ny vidin’ny vokatra lafo ary 260 000 Ariary ny kaomandy voaray nandritra ny fifaneraserana tamin’ny mpividy. Hita taratra fa voasintona sady resy lahatra amin’ny kalitaon’ny vokatra ny mpividy raha ny vola maty no jerena.
Tsikaritra ihany koa izany hatsaran’ny kalitao izany tamin’ny sehatrasa valiha na volobe na dia mbola fampirantiana aza no natao.